kml kuya dxf - Izindlela ezinhlanu zokwenza ukuguqulwa - i-Geofumadas
kml kuya dxf - Izindlela ezinhlanu zokwenza lokho kuguqulwa
NgoJanuwari, 2009 -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG
Esikhathini esithile esidlule kwakukhona ukusetshenziswa okusebenzayo umngane weZonum owenza lo msebenzi ngaphandle kokuvimbela okuningi (kml kuya ku-dxf). Ngeshwa, lo mngane wayeqhinga kakhulu lapho edala usuku lokuphelelwa yisikhathi, njengokuthi uma evula manje uthi sekuphelelwe yisikhathi; Kungenzeka ukuthi uzothengisa ilayisense ... blah, blah, blah.
Yebo, lokho esikufunayo ukuguqula amafayela we-kml kufomethi ye-dxf ezosetshenziswa umhleli we-CAD njenge-AutoCAD noma i-Microstation.
Iseluleko sokuqala: Ungathembeki.
Qinisekisa ukuthi uhlelo oyisebenzisayo alwenzi, ngakho-ke akudingeki usebenzise isicelo esengeziwe.
Ngalokho, ezininginingi, vele ushayele i-kml, nikeze ukubonakala esikufunayo ukuze sikuthumele futhi siyithumele ku-dxf. Kulula kakhulu nge $ 245.
Ngokufanayo, enye inketho yomnotho I-Global Mapper, okuyi-$ 299.
Uma lezi zinhlelo ezibiza ngaphansi kwe-$ 300 zenza kube lula lokho, mhlawumbe uhlelo lwe-GIS lwentengiso oyisebenzisayo futhi, ngakho-ke zama okokuqala okukhona kakade.
Iphuzu lesibili: Yenze kube lula futhi ngaphandle kokukhwabanisa.
Kulokhu, sizokwenza nge-gvSIG, sizisebenzise njengelayisensi yamahhala nanoma ubani osebenzise i-ArcView 3x kufanele afunde ukusebenzisa izinto eziyisisekelo emahoreni ambalwa wokuzithanda okuzifundisayo.
Ithimba lesithathu: Yeka ukufundwa, yenza nje.
kml ukuya ku-dxf ezinyathelweni ezinhlanu
I-1 Vula i-gvSIG
Kumelwe kube yi-gvSIG 1.9 alpha noma ngaphezulu kunokwakhiwa kwe-18, ngoba inguqulo ehleliwe ye-1.3 ayivule amafayela we-kml. gvSIG kungaba ukulanda kwekhasi lakho, futhi ngilapha Ngangiqhathanise ezinye izinzuzo zale nguqulo esithemba ukuthi maduzane izothatha iziqu njenge-gvSIG 2.0
I-2 Dala umbono
Uma ufaka i-gvSIG, ukhetho "umbono" lukhethwa kumphathi weprojekthi futhi inkinobho yokwakha umbono omusha ucindezelwe.
Ungayibamba, yithinte futhi inkinobho ethi "rename", endabeni yami ngiyibizile ngokuthi "iCadastre". Kulezi zinto izindawo ezifunwayo zombono zilungisiwe (hhayi ngokubunjwa ngabanye)
I-3 Vula umbono
Ukuze uvule umbono, chofoza kabili kuso, noma uthinte bese ucindezela inkinobho "evulekile" ephathini elilungile. Lokhu kufanele kuvulwe ungqimba we-kml, ngokuvumelana nezici ezazingenayo, ungavula imibono eminingi kanye nezendlalelo njengoba uthanda, kanye nezendlalelo ze-ArcView.
I-4 Vula i-kml
Uma umbono ubuvuliwe, i-kml ilayishwe inkinobho yenkengezo yokwengeza. Uhlobo lomshayeli kml lukhethiwe, futhi ifayela liseshwa (lingaba yi-kml noma i-kmz).
Uma zihleliwe, kungenzeka ukushayela i-dgn, dwg, dxf, shp phakathi kwabanye. Engxenyeni engezansi, ukubonakala kulungiselelwe.
I-5 Thumela ku-dxf
Ukuze uyithumele, thinta ungqimba, bese ukhetha inketho "ungqimba / ukuthekelisa" bese ukhetha i-dxf.
Kuyathakazelisa ukuthi i-gvSIG nayo yenza ukuthi ukuguqulwa kusuka ku-kml kuya ku-shp nakwezinye izikhathi.
Ithini lesine: Ungamzondi isofthiwe yakho oyintandokazi.
Ukuthula, kungenzeka ukuthi lezi zinqubo zansuku zonke zidinga ukuthi izinhlelo zethu ezinkulu ze-GIS zisebenzise ukusebenza kwazo okusheshayo.
Ezinye izindlela ze-4 zokuguqula amafayela kml kuya ku-dxf (kml kuya ku-dxf):
I-ArcView DGN DWG I-GvSIG OS KML kml ukuya ku-dxf GIS ezininginingi shp
Thumela Previous«Langaphambilini Ukukhuthaza izinhlelo: DielmoOpenLiDAR
Post Next Imephu yamafuthaOlandelayo "
Izimpendulo ze-4 kuya ku- "kml kuya ku-dxf" - Izindlela ezinhlanu zokwenza lokho kuguqulwa "
Agasti, i-2016 ku
Benginamafayela athile we-SHP futhi ekugcineni ngikwazi ukuwaguqula abe yi-DXF ngenxa yalolu hlelo. Angikaze ngibone ukuthi yimaphi amanye amathuba onawo, lapho nje uzoba nesikhathi ngizophenya okuningana. Okwamanje, super !!!
Ngokuqinisekile usebenzisa inguqulo yokugcina.
Lesi sihloko sivela ngoJanuwari we-2009, kodwa kuze kube manje usuku lunezinguqulo ezintsha ze-gvSIG okufanele ngabe sezixazululwe kakade inkinga.
Mina banenkinga efana neyami mario livela kimi siguienet iphutha "awagcinwa ngumsebenzisi" futhi ungqimba uphawu elibomvu nge cross, kwesimiso kulayishiwe kusuka isixhumanisi okuncane kulokho Ngikholwa uboniswa ngumuntu buyekeza,
Ingabe kukhona enye indlela ?? yimuphi omunye uhlelo ??
ngiyabonga nekhasi elihle kakhulu
Ngizamile ukuvula i-kml noma kmz ngaphandle kokuphumelela. Uma ngizama ngithola umlayezo wephutha elilandelayo: "Iphutha alibanjwanga ngumsebenzisi" nasemininingwaneni eminingi yemiyalezo engenakwenzeka ukubhala.
Yini engingayenza engalungile ??
Ngiyabonga kakhulu futhi ngilindele impendulo yakho.
Ukubingelela nokuqhubeka kanje.